Kordhinta tirada qoolleyda badda leh burooyinka ku yaal Florida | Cusbooneysiinta Cagaaran
Ku sii badanaya qoolleyda badda ee Florida waxay leeyihiin burooyin
Qoolleyda badda oo qiyaastii laba sano ah ayaa yimid isbitaalka Florida, oo gaar u ah noocan xayawaanka ah, oo leh fibropapillomatosis, a cudur dilaa ah waxaa sababa nooc ka mid ah fayraska herpes.
Qoolley laba sano jir ah iyo maxaa wali wey da ’yar yihiin si loo ogaado inay lab yihiin ama dhadig yihiin, waxay ku dhacaan cudurkan oo sababa burooyin taxane ah oo waaweyn sida kubbadaha golf-ka ee ku jira jidhkooda.
Khubaradii wali ma awoodaan inay fahmaan sida virus-kan loo qaado ama waxyaabaha sababa, in kastoo cilmi baaris la sameeyay ay muujisay inay la xiriirto wasakheynta iyo kulaylka caalamiga ah. Isla mar ahaantaana ay dadka kuleylka badda ku soo kabanayaan tiro aad u wanaagsan, kiisaska fibropapillomatosis way bateen, iyagoo buuxinaya jidadka xaruntaan loo yaqaan 'Hospital de Tortugas'.
Doug Mader, oo ah dhakhtar xoolaha ku takhasusay isbitaalkan, ayaa sheegay in markii uu shaqada bilaabay 20 sano ka hor 6 ilaa 7 faragelin bil gudaheed iyada oo dhibaatadan. Hadda waxay dhammeeyeen laga bilaabo lix illaa siddeed toddobaad. Gorgor kasta wuxuu u baahan yahay dhowr qalliin si looga saaro dhammaan burooyinka, kuwaasoo daboolaya qoorta, hoosta, iyo indhaha. Taas oo macnaheedu yahay in marar badan ay indho beelaan, taas oo ka dhigaysa mid aan u suurta geli karin inay raadsadaan cunto.
Qoolleyda badweynta cagaaran ayaa lagu taxay sida noocyada khatarta ku jira 1976Laakiin hadda tiradoodu aad ayey u kordhay iyadoo 28.000 buul laga tiriyay sanadkii hore Florida.
Horeba 2012 sidoo kale waa dhif iyo naadir in la helo qoolley la dhigey burooyin labada indhood ahLaakiin tan iyo dhicitaankii 2013, mar kasta oo ay diintu soo gaadho cisbitaalka fayraska noocan ah, way dabooli jirtay. Ka dib markii ay sannad ku qaadatay barkadaha isbitaalka, buro aan lahayn, qoolleydu aakhirkii waxay ku noqdeen deegaankoodii dabiiciga ahaa.
In kasta oo kuwa haysta lnabarrada sanbabada kelyahana ma jiro wado lagu badbaadiyo.
Wadada buuxda ee maqaalka: Cusbooneysiinta Cagaaran » General » Noticias » Ku sii badanaya qoolleyda badda ee Florida waxay leeyihiin burooyin
Borotiinada xayawaanka iyo deegaanka, iskudhaf khatar ah